UMASIPALA UGQUGQUZELA EZOLIMO KUMPHAKATHI – Sivubela intuthuko Newspaper
UMKHANDLU wakwaMaphumulo enyakatho yeKwaZulu Natal ngokubambisana noMnyango weZolimo esiFundazweni bahambele kuWard 4 kwaMaqumbi njengoba kuyinyanga yabantu abasha.
Kuvelile ukuthi inhloso enkulu yalolu hlelo ukuthi lusetshenziselwe ukugqugquzela abantu abasha ukuba bangabi madolonzima uma kukhulunywa ngeZolimo kodwa bangene kuzona.
Lolu hlelo lusetshenziselwe ukunikezela ngolwazi olunzulu kubantu abasha bakule ndawo abanenentshisekelo enkulu yokungena kweZolimo.
UMnuz Thabo Gumede okuzona eZolimo uthe wangena kuzona ngoba wayekade ebone ingqayizivele yethuba lokuba aziphilise impilo engcono kakhulu.
UMnuz Gumede ube esephonsela inselelo abantu abasha baKwaMaphumulo ukuba bangaziphuthiseli kodwa nabo bangene shi kweZolimo.
Kuhlalukile ngaleli langa ukuthi uMnuz Gumede ungomunye wosomabhizinisi abahlomula ohlelweni lokulekelela abalimi olubizwa ngokuthi yi-Employement Stimulis Fund (PESI) oluhlose kakhulu ukufukula osomabhizinisi abasafufusa abagxile kakhulu kweZolimo.
UMnuz Gumede uthe okuyikhona okumqoka kakhulu ukubona abantu abasha bekwazi ukuwenza inzuzo besebenzisa eZolimo. Uchaze eZolimo njengomthombo ongasetshenziselwa ukufukula umnotho waKwaMaphumulo kanjalo nowasesesiFundazweni, iKwaZulu Natal.
Bekukade kukhona namalunga enhlangano ebizwa ngokuthi ISipho Youth Project. Bona bahlomula ngaphansi kohlelo oluqhakanjiswa kakhulu kweZolimo olubizwa ngokuthi yi-One Home One Garden.
ISipho Youth kuvelile ukuthi isebenzisana nabanye abalimi abaningi kakhulu abakhona esiFundazweni iKawaZulu Natal. Ngalo lolu suku abalimi abasafufusa baphiwe izinsiza zokulima ebezivela kuMkhandlu wakwaMaphumulo. Phakathi kwezinto abalimi bakwaMaphumulo abanikezwe zona kubalwa amathangi amanzi nokunye okuningi.
Ngayo futhi le nyanga uMkhandlu wakwaMaphumulo kade unohlelo olumqoka kakhulu oluthi: Keep Maphumulo Clean.’’ Inhloso yawo ukugqugquzela amalunga ophakathi ukuthi enze isiqiniseko sokuthi le ndawo iba sesimweni esifanelekile zikhathi zonke ngokuthi bayigcine ihlanzekile.